Abbaa Alangaa Waliigalaa: Haasaawwan jibbiinsaa ittisuuf labsiin qophaa'aa jira - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Haasaawwan jibbiinsaa fi yakkoota biroo ittisuuf labsiin qophaa'aa jiraachuun ibsameera.
Haasaawwan jibbiinsaa, daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa fi namootaa ittisuuf labsiin qophaa'aa akka jiru Abbaan Alangaa Waliigalaa beeksise.
"Gochaaleen malaammaltummaa fi hannaa piroojektoota gurguddoo keessatti raawwataman qoratamaa jiru" jedhan daayirektarri komunikeeshinii fi dhimmoota qunnamtii uummataa abbaa alangaa waliigalaa obbo Zinaabuu Xuunuu.
Barreefamoota fi haasaawwan jibbiinsa eenyummaa namootaa irratti xiyyeefachuun miidiyaalee hawwaasummaa irratti maxxanfaman ittisuuf labsiin qophaa'aa jirachuus ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru.
Daddabarsa namootaa seeraan alaa fi dhimma godaansaa akkasumas yakkawwan gareedhaan raawwataman, seer-malummaa fi dhimma daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa irrattis labsiin qophaa'aa akka jiru obbo Zinaabuu Xuunuu hiimaniiru.
Sakkata'iinsa fi to'annoo meeshaalee waraanaa fi maallaqaa irratti taasifamaa jirun meeshaaleen waraanaa fi maallaqni biyya alaa heddu to'annaa jala ooleeras jedhan.
Daddabarsi meeshaalee waraanaa biyyattii keessatti mul'atu kaayyoo mataasaa kan qabu fi sodaachisaa kan ta'e dha.
Tarkaanfiin namoota meeshaaalee waraanaa karaa seeraan ala ta'en daddabarsan irratti fudhatamaa ture laaqamaa waa ta'eef labsii haaraa baasuun barbaachisaa ta'eera."
Kana malees qaamolee jijjiirama mul'ataa jiru gufachiisuu fi walitti bu'iinsi ummattoota gidduutti akka uummamuf hojjetaa jiranis to'annoo jala oolaa akka jiran Obbo Zinaabuu himan.
Rakkooleen kutaa biyyattii garaagaraati uummaman hanqina olaantummaa seeraa irraa kan maddan kan jedhan daayreektarri komunikeeshinii kun dhiittaan mirga namoomaa lammiilee irratti qaqqabus lammiileen biyya isaanii keessatti bilisa ta'anii akka hin jiraanne taasiseera jedhan.
Alaabaan gamtaa Afriikaa alaabaa Itoophiyaa cinatti miirmirfamuufi
Gama biraatin sirni haqaa biyyattis haqummaa kan hin qabne waan ta'ef sirna haqaa biyyattii irratti jijjiirama fiduun dirqama akka ta'e Obbo Zinaabuu himan.
Rakkoon dandeettii fi naamusaa qaamolee haqaa bira jirus rakkoolee sirna haqaa biyyattii keessatti mul'atan keessaa tokko waan ta'ef humna namaa dandeettii fi naamusa sirna haqaa qabu ijaaruuf ni hojjetama jedhan.
Dhimma dokumantarii METEC irratti kan gaafataman Obbo Zinaabu "dokumantariin hojjetame galmeen qorannoo erga qindaa'ee booda kan hojjetame fi galmee qorannoo irraa adda waan hin taanef murtee abbootii Seeraa irratti dhiibbaa hin qabaatu" jedhan.
Kana malees dhimmi to'annoo jala ooluu hoggantoota METEC fi ejansii odeeffannoo tika biyyaalessaa kaayyoo siyaasaa kan hin qabne akka ta'es obbo Zinaabu himan.
"Hanni dhaabbata kamiyyuu keessatti yoo jiraate ni qoratama" jedhaniiru.
Abbaan alangaa waliigalaa karoora hojiilee ijoo guyyoota 100 ilaalchisuun ibsa kenne.